चीन चिढ्याउने कदम ? - समसामयिक - नेपाल
चीन चिढ्याउने कदम ?
आलोचनाको तारोमा कांग्रेस सभापति
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को निम्तोमा एक साता लामो (२८ असारदेखि ४ साउन) चीन भ्रमणबाट फर्केपछि नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डलका नेता रामचन्द्र पोखरेलले सभापति शेरबहादुर देउवालाई उत्तरी छिमेकीको सन्देश सुनाए । चिनियाँ पक्षले कांग्रेस पार्टीको शीर्ष तहबाटै भ्रमणको अपेक्षा गरेकाले सभापति देउवा नै चीन जानु उपयुक्त हुने सुझाए ।
तर, त्यसको चार महिना नबित्दै १९ कात्तिकमा भारतको पर्यटकीय राज्य गोवामा आयोजित एक यस्तो कार्यक्रममा देउवाको सहभागिता हुन पुग्यो, जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवासरहकै नेताको मान्यताका साथ निर्वासित तिब्बती सरकारका ‘सिक्योङ’ (प्रधानमन्त्रीसरह) लोब्साङ साङ्गे पनि उपस्थित थिए । यति मात्र होइन, कार्यक्रममा अनुपस्थित भए पनि देउवाको सम्बोधनलगत्तै निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामाले समेत भिडियो सन्देश दिएका थिए । भारतको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीनिकट राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) समर्थित ‘थिंकट्यांक’ इन्डिया फाउन्डेसनले १९–२१ कात्तिकमा आयोजना गरेको ‘इन्डिया आइडियाज कन्क्लेभ’ अन्तर्गत ‘इन्डिया एट सेभेन्टी : डेमोक्रेसी, डेभलपमेन्ट एन्ड डिसेन्ट’ विषयक सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थितिका कारण देउवा विवादमा तानिए । त्यो उपस्थितिका कारण कांग्रेसको एक चीन नीतिमा समेत सन्देह उत्पन्न हुन पुगेको आरोप स्वयं उनको पार्टीका नेताहरूले नै लगाएका छन् ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता रामशरण महत त्यस्तो कार्यक्रममा देउवाको उपस्थितिलाई कुनै हालतमा पनि सही मान्न नसकिने बताउँछन् । कांग्रेसले सुरुदेखि नै एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्दै आएको बताउँदै महत भन्छन्, “एकातिर दलाई लामाले तिब्बत चीनको अंग होइन भनिरहनुभएको छ । तर, अर्कोतिर सभापति देउवा त्यस्तो विचार राख्ने तिब्बती नेतासँगै कार्यक्रममा बसेको तस्बिर प्रकाशित भइरहेको छ । तिब्बती नेतासँग पार्टी सभापतिको सम्बन्ध देखिनुले कांग्रेसको एक चीन नीति सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश गएको छैन ।”
हुन त पृथकतावादी नेतासँगै देउवा कार्यक्रममा सहभागी भएको समाचार र तस्बिर सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध भएको भन्दै कांग्रेसले विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्‍यो, २६ कात्तिकमा ।
फाउन्डेसनका तर्फबाट निम्तो प्राप्त भएपछि प्रमुख अतिथिका रूपमा गोवा जाने कार्यक्रम कात्तिक पहिलो साता नै तय गरिसकेका थिए देउवाले । सभापति देउवाका सहयोगी भानु देउवाका अनुसार निम्तोका साथ कार्यक्रमको विस्तृत विवरणसहितको ब्रोसर पनि उतिबेलै पठाइएको थियो ।
फाउन्डेसनको वेबसाइटमा समेत भेटिने त्यो ब्रोसरमा साङ्गेलगायत अन्य १२ जना विशिष्ट वक्ताका रूपमा रहने उल्लेख छ । कार्यक्रममा को को उपस्थित हुँदै छन् भन्ने ख्यालै नराखी सहभागी भएर देउवाले कूटनीतिक अपरिपक्वता देखाएको बताउँछन् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता महत । भन्छन्, “प्रधानमन्त्री भइसकेको नेताले आफूलाई कस्तो कार्यक्रममा बोलाइएको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने । बुझीबुझी पनि जानुभएको हो भने त्यो जत्तिको हल्का काम केही होइन । झन् नबुझीकनै जानुभएको हो भने त्यो झन् धेरै अपरिपक्वता भयो ।”
तर, तिब्बती नेताहरूको उपस्थिति छल्ने गरेर नै देउवा कार्यक्रममा उपस्थित भएको दाबी गर्छन् देउवाका सहयोगी भानु । उनका भनाइमा देउवा उद्घाटन सत्रका लागि प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्त्याइएका थिए । त्यो कार्यक्रममा साङ्गे उपस्थित हुने जानकारी देउवालाई नदिइएको बताउँछन् उनी । भन्छन्, “तर, उहाँ मञ्चमा जानुअगाडि नै कार्यक्रमस्थलमा नजिकै साङ्गे आएर बसेका रहेछन्, त्यसैले अनावश्यक विवाद र झमेला निम्त्यायो । साङ्गे आडमा बसेको कुरा देउवाले पछि मात्र
थाहा पाउनुभयो ।”
स्पष्टीकरण जस्तो दिइए पनि पुष्टि भएको कुरा के हो भने आफूलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्त्याइएको कार्यक्रममा पृथकतावादी नेता उपस्थित हुन्छन् भन्ने कुरा देउवालाई कात्तिक पहिलो साता नै जानकारी थियो । यसको पुष्टि कार्यक्रमका बारेमा पहिल्यै बाँडिएको ब्रोसरबाटै गर्छ, जसमा अरू सहभागीसँगै देउवा एवं निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख साङ्गेको तस्बिर र नाम उल्लेख छ । तर, यस्तो कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा पर्ने प्रभावको विश्लेषण र त्यसका आधारमा निर्णय लिने काम देउवाबाट हुन नसकेको देखाउँछ यो घटनाले ।
स्रोतका अनुसार कार्यक्रमका लागि देउवाले विदेश मामिलामा दखल राख्ने पार्टी पंक्ति मात्र होइन, आफैँनिकट परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग समेत सल्लाह गरेका थिएनन् । उनी कुनै बहानामा नयाँदिल्ली जाने र उच्च राजनीतिक भेटघाट गर्न प्रयासरत थिए । त्यही मौका पारेर उनलाई त्यो कार्यक्रमको निम्तो दिइएको थियो । प्रमुख अतिथि मात्र होइन, उच्च राजनीतिक भेटघाट गर्ने योजनासमेत पूरा हुने भएपछि अन्य कुरा ख्यालै नगरी कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बन्न उनी सहजै राजी भए । एक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भन्छन्, “उहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, त्यो पनि तिब्बत स्वतन्त्रता पक्षधर नेतासँगै । यसले गर्दा तिब्बती स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई नेपालका पूर्व र हुनेवाला प्रधानमन्त्रीले मान्यता दिएको सन्देश प्रवाहित हुन पुग्यो ।”
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रका चार प्रमुख अतिथिमध्ये देउवा मात्र गैरभारतीय थिए । बाँकी तीनमध्येमा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, भारतीय अर्थमन्त्री अरूण जेटली, भारतीय आध्यात्मिक गुरु स्वामी तेजोमायानन्द थिए । तीन विशिष्ट भारतीय व्यक्तित्वहरू प्रमुख अतिथि हुँदाहुँदै देउवालाई पनि उही हैसियतमा किन निम्त्याइयो भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै अर्थपूर्ण छ । यसमा भूराजनीतिक स्वार्थले काम गरेको हुन सक्ने ती पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीको भनाइ छ ।
गोवाको कार्यक्रममा देउवाको उपस्थितिले उत्तरी छिमेकीलाई झस्काएको छ । तर, त्यताबाट त्यस्तो कुनै औपचारिक प्रतिक्रियाचाहिँ आएको छैन । यद्यपि, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ त्यस्तो विवादास्पद कार्यक्रममा देउवाको उपस्थितिका कारण चिनियाँहरू सशंकित हुन पुगेको बताउँछन् । भन्छन्, “यो घटनापछि चिनियाँहरूले आफू रुष्ट भएको छनक दिएका छन्, अनौपचारिक तवरमा । नेपाल–चीन सम्बन्धमा चिसोपना ल्याउने कारक त्यो घटना बनिसकेको छ ।”